Nhau - Iyo yeramangwana ruzivo rwezvokurapa zvemhuka
Iyo yeramangwana ruzivo rwezvipfuyo mushonga
Parizvino, indasitiri yedu yekumba ye aquaculture iri kufamba nenzira yehunyanzvi uye chiyero Varimi vechivanhu vari kujoina mahunyanzvi emakambani. Nekuvandudzwa kwemusika, kutengesa uye kushandiswa kwemishonga yezvipfuyo kwatanga kuchinja, izvo zvatanga kukanganisa kugadzirwa nekutengeswa kwehombodo yemushonga.
Kutanga, chipfuyo chemushonga kurongedza mabhodhoro chinoda hunyanzvi dhizaini nekusimudzira. Tsika yezvipfuyo yemabhodhoro ekuputira haina kunongedzwa, uye vashoma vagadziri vakagadzirira iwo wemhuka wezvipfuyo wemabhodhoro emusika. Ikozvino, neshanduko mumusika wezvokurapa wezvipfuyo, hukuru hukuru hwehunyanzvi hunoda kukura kwakanangidzirwa kwemabhodhoro emishonga yezvipfuyo kuti aenderane nemusika. Chechipiri, iko kuitika kwesimba rezvipfuyo zvekurapa mabhodhoro kune hukuru hukuru hwekuchinja. Varimi vechivanhu vane hushoma, hushoma hwetsika, uye nehunhu hushoma hwemishonga yezvipfuyo. Nekudaro, varimi vechikuru vanotora kugadzirwa kwakasimba uye vanoda hombe-inokwanisa mabhodhoro emishonga yezvipfuyo kuzadzisa zvido zvavo.
Iyo yemhuka yekurapa bhodhoro kurongedza ichasangana nehunyanzvi vafudzi mune ramangwana, uye zvakare inogona kushanda nesimba muzvinhu zvekurongedza ruzivo network kuti ikurudzire kufambira mberi kweiri rese veterinary mushonga indasitiri.